China Graphite crucible ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yidong
ဂရပ်ဖိုက်မီးဖို၊ လူသားတို့တွင်ကာလကြာရှည်ဂရပ်ဖိုက်မီးတောင်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အစောဆုံးလူများသည်သဘာဝအားဖြင့်ဖိုက်တာ (ဖိုက်ဖိုက်ဖိုက်နှင့်မြေကြီးဖိုက်) နှင့်ရွှံ့၊ ကျောက်တုံးများသို့မဟုတ်သဲများကိုရောစပ်။ ကွက်လပ်များထဲသို့ရောနှောအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးသတ္တုစပ် (သတ္တု၊ ကြေးနီ၊ သံ၊ သံမဏိစသည်တို့) အတွက်မြေထည်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ Graphite crucible သည်မြင့်မားသောစက်မှုစွမ်းအား၊ refractoriness၊ အပူစီးကူးမှု၊ အရည်အချင်းအမျိုးမျိုးကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးမြင့်မားသောအပူချိန်ဖြေရှင်းချက်၏တိုက်စားခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူသတ္တုအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများသည်လျှပ်စစ်မီးဖိုများကို အသုံးပြု၍ သတ္တုအမျိုးမျိုးကိုအရည်ပျော်စေရန်သတ္တုအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ ပစ္စည်းကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ရုံများသည်ဤဂရစ်ဖိုက်မီးဖိုအမျိုးအစားကိုဆက်လက်အသုံးပြုကြသည်။
၁၉ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင်အတုဖိုက်များစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှလူတို့သည်ဂရပ်ဖစ်အတုများကိုဂရပ်ဖိုက်စ်ကျောက်ဂူများအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောပုံသဏ္graphာန်ဖိုက်၊ ခိုင်ခံ့သောဖိုက်၊ ဖန်ကာဗွန်စသည်တို့ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဤအရာများမှပြုလုပ်ထားသောဂရစ်ဖိုက်ပုံသဏ္lesာန်များသည်ဂရစ်ဖိုက်မီးသွေးခဲများအသုံးပြုခြင်းကိုကျယ်ပြန့်စေသည်။ သတ္တုများရောစပ်သည့်အပြင်သတ္တုအရည်များအပြင်၊ ထိုကဲ့သို့သောရွှေနှင့်ငွေအဖြစ်အဖိုးတန်သတ္တုသန့်စင်။ , အနုမြူစွမ်းအင်ယူရေနီယမ်သတ္တုစပ်ခြင်း, semiconductor material silicon single crystal, germanium single crystal ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
ဂရစ်ဖိုက်မီးသွေးခဲများကိုကျောက်ဂူသတ္တုပုံသဏ္naturalာန်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ လူလုပ်ဂရစ်ဖိုက်မီးခိုးများ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောဂရပ်ဖိုက်များ၊ ရည်မှန်းချက်အရသံမဏိမီးတောင်များ၊ ကြေးနီမီးကျောက်များ၊
ပြည်တွင်းဖိုက်အမြှောက်အကျိတ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအဆင့်သည်တင်သွင်းသောမှေးစက်များအထိရောက်ရှိခဲ့သည်ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပြည်တွင်းဖိုက်အကျိတ်များသည်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည် -
၁။ မြင့်မားသောဖိုက်မှိုစီရီကလိတ်များသည်အလွန်ပူသောအပူစီးကူးမှုရှိစေပြီး ၄ င်း၏အပူစီးကူးမှုသည်အခြားတင်သွင်းသောအရိုးစုများထက်သိသိသာသာပိုကောင်းသည်။ ; ဂရက်ဖိုက်အထူးသဖြင့်ဂရက်ဖိုက်ကျောက်ဂလင်း။
၂။ ဂရစ်ဖိုက်မီးဖိုတွင်အထူးဖန်သားမျက်နှာပြင်နှင့်သိပ်သည်းသောပုံသွင်းပစ္စည်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်း၏ချေးခြင်းခံနိုင်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေပြီး၎င်း၏သက်တမ်းကိုကြာရှည်စေသည်။
၃။ graphite crucible ရှိ graphite အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်အပူစီးကူးမှုရှိသည့်သဘာဝ graphite အားလုံးဖြစ်ပါသည်။ လျင်မြန်စွာအအေးခံမှုကြောင့်ဂိုက်ဖိုက်မီးဖိုကိုအပူပေးပြီးနောက်၎င်းသည်အေးခဲသောသတ္တုစားပွဲပေါ်တွင်ချက်ချင်းမထားသင့်ပါ။
၁။ Crucible ၏သတ်မှတ်ချက်နံပါတ်သည်ကြေးနီပမာဏ (kg) ဖြစ်သည်။
3. သယ်ယူပို့ဆောင်သည့်အခါဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ပါ။ ၎င်းသည်မကျရန်နှင့်တုန်ခါရန်လုံးဝတားမြစ်ထားပါသည်။
4. အသုံးမပြုမီ၎င်းကိုခြောက်သွေ့စေသောပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်မီးဖိုများဖြင့်ဖုတ်ရမည်။ အပူချိန်ကို ၅၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်စေသည်။
၅။ မီးဖိုမျက်နှာဖုံးကိုမီးဖိုအဖုံးအထက်မျက်နှာပြင်တွင် ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းမှကာကွယ်ရန်မီးဖိုချောင်ခံတွင်းမျက်နှာပြင်အောက်တွင်ထားသင့်သည်။
၆။ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများသည်အရည်၏အရည်ပျော်မှုပမာဏကိုအခြေခံသင့်သည်။ ပစ္စည်းများစွာကိုမထည့်ပါနှင့်နှင့်မီးဖိုချောင်ထဲကိုဖိသိပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်။
၇။ မီးဖိုထဲကထွက်လာတဲ့မီးနှင့်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်တို့သည်သင့်လျော်သောပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ ညှပ်၏အလယ်ပိုင်းအပိုင်းသည်အင်အားကြောင့်ပျက်စီးခြင်းကိုတားဆီးသင့်သည်။
နောက်တစ်ခု: UHP ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း
ဂရပ်ဖစ် Crucible စျေး
Graphite Crucible အရွယ်အစား
ဂရပ်ဖစ် Foundry Crucibles